मुलुकको बर्तमान राजनीतिक अवस्था बारे केहि कुरा - WorldWide Khabar
मुलुकको बर्तमान राजनीतिक अवस्था बारे केहि कुरा
यति बेला मुलुकको राजनीति तरंगित छ । अब के हुन्छ कसैलाई थाहा छैन । अब यहि सरकारले निरन्तरता पाउँछ की अर्को सरकार बन्छ केहि थाहा छैन । राजनीतिमा कतिखेर के हुन्छ कुनै ठेगान हुदैन । अब यही सरकार कायम हुन्छ या नयाँ सरकार बन्छ भन्ने कुरामा अनेक खालको बहस भने चलिरहेको छ । यति बेला मुलुकको राजनीतिक धु्रवीकरणमा बिभाजित छ । राजसपाले वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरे ओली सरकार नै कायम रहने देखिन्छ । यदि राजसपाले ओलीलाई साथ नदिएमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राजसपाको त्रिशङ्कु सरकार बन्ने अवस्था पनि छ ।
राजसपामा पनि केपी ओलीलाई साथ दिने की कांग्रेस, माओवादी केन्द्र संग मिलेर सरकार बनाउने भन्ने कुरामा बिवाद छ । खास गरी राजसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो केपी ओलीको पक्षमा उभिएका छन् भने अध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव ओलीको बिपक्षमा छन । भट्टराई र यादव कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनको पक्षमा उभिएको संकेत देखिन्छ । यता माओवादी केन्द्रले अहिले सम्म वर्तमान सरकारलाई दिएको पूर्वसमर्थन फिर्ता लिएको छैन । जसको कारण अहिले पनि वर्तमान सरकार बहुमतमै छ । यदि माओवादी केन्द्रले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो भने सरकार स्वत अल्पमतमा पर्नेछ । त्यसपछि मात्र नयाँ सरकार बन्ने खेल सुरु हुन्छ ।
माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन किन फिर्ता लिइरहेको छैन ? यो गम्भिर प्रश्न छ । नेपाली काँग्रेसले नयाँ सरकारभन्दा पनि नयाँ निर्वाचनका लागि जोड दिइरहेको छ । कारण के हो भने कम्युनिस्ट पार्टीहरु फुटेको अवस्थामा निर्वाचनमा जाँदा पार्टीलाई फाइदा पुग्ने अनुमान काँग्रेसको छ । त्यहि भएर काँग्रेस निर्वाचनमा जोड दिन्छ । त्यसो त प्रधानमन्त्री ओली पनि नयाँ निर्वाचनमा जोड दिन चाहान्छन । सत्तामा रहेको बेला निर्वाचनमा जाँदा बहुमत ल्याउँछु भन्ने ओलीको मनोविश्लेषण हुन सक्छ । यो बिषयमा माओवादी केन्द्रका नेताहरु मौन छन । सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले पूर्वनेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएका छन ।
सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल समूह राजनीतिक सकसमा परेका छन् । सबैभन्दा बढी सकस माधव नेपाल–झलनाथ खनाल समूहलाई परेको देखिन्छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले माधव–झलनाथ समूहलाई पेल्नु पेलेका छन । जसको कारणले गर्दा माधव–झलनाथ समूह पार्टीमा समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् । पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत चाहिन्छ । माधव–झलनाथ समूहलाई ठूलो समस्या परेको छ । माधव–झलनाथ समूहमा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत भए पनि संसदीय दलमा यो संख्या छैन । अब नेपाल–खनाल समूह पार्टीमै रहने र समानान्तर गतिविधि गर्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । भारत खास गरी अमेरिका र चीनको प्रभाव नेपाली राजनीतिमा नपरोस् भन्न चाहन्छ । भारत, चीन, अमेरिकाको नेपालमा आ–आफ्नै किसिमको स्वार्थ छ । एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई जनताले झन्डै दुई तिहाइ बहुमत दिएकै थिए । आपसमा मिल्न नसकेर भाँड भैलो छ ।
अब चुनावमा जाँदा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई जनताले फेरि पत्याऊलान् ? एमाले र माओवादी केन्द्र जनता संग के भनेर भोट माग्न जाने ? यदि पार्टी र मुलुकको भविष्य सोच्ने हो भने केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल , बामदेव गौतम मिलेर जानु पर्छ । त्यति मात्र होइन अलग पार्टीमा रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत सहभागी बनाएर संगै लैजाने प्रयास हुनु पर्छ । यो तालले देश चल्दैन । कांग्रेस चुनावमा जान हतारिनुको प्रमुख कारण भनेको के हो भने कम्युनिस्टहरुको फुटलाई आधार मानेर हो । जनताले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ५ वर्षका लागि सरकार चलाउन स्पष्ट म्यान्डेट दिएका हुन् । यो पाँच वर्षको अवधिमा अझै दुई वर्ष सरकार चलाउने अवधि छ । यदि एमाले र माओवादी केन्द्र यसरी नै जाने हो भने अबको जनमत कांग्रेसतिर नजाला भन्न सकिन्न ।
Previous articleनायक संजित भण्डारीको होली तस्विर
Next articleकृषि क्षेत्रमा मिहिनेती हातहरुको खाँचो